Nizeria: Misaritaka, Miandry Ny Fahatongavanà Vehivavy Iray? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Septambra 2011 23:39 GMT
Atolotro an'i TJ, namako ao amin'ny vohikala Facebook, ny lohatenin'ity lahatsoratra ity- :
Maro ireo Nizeriana no tsy mahalala fa misavoritaka i Nizeria iray manontolo miandry ny fahatongavan'ilay vehivavy iray…
Io vehivavy resahana io dia i Ngozi Okonjo-Iweala (NOI), Minisitry ny Fitantanam-bola vaovao sy Minisitra Misahana ny Toe-karena. Vao haingana kely i NOI no tale jeneralin'i Banky Iraisam-pirenena.
Raha vao nanomboka nikotaba ny haino aman-jery mikasika an'io fanendrena azy io, dia tsy nitsahatra niresaka momba an'io vehivavy manam-pahefana ambony indrindra tao amin'ny kabinetran'ny filoha Goodluck Jonathan io ny mponin'ny aterineto . Ho an'ny rehetra, izy io no manam-pahaizana indrindra amin'ireo ekipa miara-miasa amin'io filoha io.
I Ngozi Okonjo-Iweala, minisitra vaovao misahana ny fitantanam-bola ao Nizeria. Loharanon'ny sary: IMF (Natokana ho an'ny sarambabem-bahoaka)…..
Hita taratra mazava tsara fa mpanakorontana no voambolana namaritana an’ i Okonjo-Iweala raha araka ny fanazavan'i @nmachijidenma:
“Raha vao voatendry ho minisitry ny fitantanam-bola aho dia nopetahan'izy ireo ny anarana hoe Okonjo-Wahala – na vehivavy maha-be olana. Midika izany hoe ‘Tsy hahita fiadanana ianao.'Fa tsy raharahako izay anarana hiantsoan'izy ireo ahy. Mpitolona aho; ary mifantoka tanteraka amin'ny zavatra sahaniko aho, ary tsy azon'iza na iza sakanana amin'ny tanjona tiako tratrarina. Raha manembatsembana ny làlako ianareo, dia ho dakàko.”.
Lahatenin'i Ngozi Okonjo-Iweala minisitry ny fitantanam-bola tao Nizeria teo aloha ireo voalaza eo ambony ireo, nandritry ny fotoana naha minisitra azy tao Nizeria.
Nidera ny fitiavan-tanindrazan'i NOI sy ny finiavan'ny filoha Goodluck i Segun Adeleye:
Ny fahavononan'i Dr Ngozi Okonjo-Iweala, Tale jeneralin'i Banki Iraisam-pirenena, ho lasa minisitry ny fitantanam-bola, toerana niandraiketany teo aloha tao amin'ny governemantan'ny filoha Olusegun Obasanjo, dia ahitàna mazava tsara ny ‘fahafoizan-tena lehibe’ nataon'ny filoha Goodluck Jonathan sy Okonjo Iweala. Tsy nisy sarintsarina fifanarahana natao akory mba hamerenana amin'ny toerany ny minisitry ny fitantanam-bola teo aloha, fa tonga dia nomen'ny Filoha an'i NOI ny fahefana lehibe hiandraikitra ny ara-toe-karena, ary raha ny momba azy indray, fanindroany izao, nafoiny ny asa aman'andraikiny izay nahatonga azy ho olo-malaza eran-tany mba ho fanompoana ny tanin'ny rainy.
Any amin'ny firenena anjakan'ny kolikoly, dia tsy maintsy ‘vehivavy maha-be olana’ no ilaina raha tsy izany dia sarotsarotra ny ho lasa “Olona Mpanova ny Toe-karena ao Nizeria”. Nilaza ny heviny i TED:
Koa satria moa i Ngozi Okonjo-Iweala no vehivavy voalohany indrindra voatendry ho minisitry ny fitantanam-bola tao Nizeria, dia izy no niady tamin'ny kolikoly mba hahatonga ny firenena ho hahasarika famatsiam-bola avy any ivelany sy fiforonan'asa. Ankehitriny kosa, raha lasa talen'i Banky Iraisam-pirenena sy lehiben'ny Makeda Fund izy dia miasa ho an'ny fanovàna an'i Afrika iray manontolo.
Tamin'ny andro voalohany nandraisan'i NOI ny toeran'ny Minisitry ny Fitantanam-bola, dia toy izao manaraka izao no nitsaran'ny olona azy :
Nisafidy an'i Ngozi Okonjo-Iweala, tao amin'i Banky Iraisam-pirenena ny filoha Olusegun Obasanjo ary nanendry azy ho Minisitry ny Fitantanam-bola ao Nizeria ny taona 2003 ka hatramin'ny taona 2006, ary minisitry ny raharaham-bahiny nandritry ny fotoana fohy tamin'ny taona 2006. Nandritra ny fotoana nanatanterahany ny asa aman'andraikiny, dia hita fa izy angamba no minisitra nahomby indrindra sy nahafeno ny fepetra rehetra nilaina tao amin'ny governemantan'i Obasanjo. Nanandratra avo ny fisian'ny mangarahara ao amin'ny fitantanam-bolan'ny governemanta Nizeriana i Ngozi Okonjo-Iweala tamin'ny alalan'ny famoahana an-gazety isam-bolana ny famatsiam-bola omen'i Abuja (izay mifototra matetika amin'ny tombom-barotra azo avy amin'ny solika) ho an'ireo firenena tsirairay miisa enina amby telopolo. Nanara-maso koa izy ny fanomezana isa ny toe-bolam-panjakana voalohany nataon'ny Fitch, sy ny Standard and Poor’s, BB- tamin'izany fotoana.
Na izany aza, maro ireo olana teo anoloana ary dia hita fa nitombina izany “Tahotra an'i Ngozi Okonjo-Iweala” izany:
Mazava ho azy fa vaovao mahafaly tokoa ho an'ireo Nizeriana izany, fa ny fanamby dia ny hoe ahoana ny fomba hahavitan'i Okonjo-Iweala izany manoloana ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna izay tena mpandany vola fatratra tokoa. Tsy tapitapitr'izay, nisy nanao tatitra fa mahazo antso fandrahonana avy amin'ireo mpanao politika mpanao kolikoly sy mpanao afera i Okonjo-Iweala mampitandrina azy tsy hiverina ao Nizeria handray ny asa aman'andraikiny . …. Nisy ny ahiahy amin'ny hoe ho voahilikilika izy ao amin'ny governemanta satria tsy hitovy fomba fijery aminy avokoa ny mpikambana rehetra ao eo amin'ny fanovàna izay eritreretiny hatao. Indrindra indrindra, toa sahala amin'ny manitsaka ny tokotany filalaovan'ny goavana izy amin'ny ezaka ataony hanena ny fandaniam-be ataon'ny governemanta.
Ny fiaraha-miasany tamin'i Banbky Iraisam-pirenena dia nahatonga azy hanana ny ‘Janus-Complex’. Mety ho henjana ny ezaka hiala amin'ny fatotry ny tadin'ny antsoina hoe ‘mpambotry vahoaka – Imperialist’. Nanitrikitrika i Uchenna Osigwe hoe:
Tsy mankahàla an'i NOI aho ary miara-mifaly aminy aho raha ny marina amin'ny nahatratrarany am-panetren-tena ny tanjony teo amin'ny sehatra nofidiany . Nefa tsapako koa fa ny sehatra (institutions) rehetra niasany dia sehatra mpambotry vahoaka izay tsy nanàla na dia firenena iray mahantra aza tsy ho ao anaty fahantrana. Manao fanamby aminareo tsirairay avy mamaky ity lahatsoratra ity aho mba hanondro firenena iray any amin'ny ilabolantany atsimo ka hoe nafahan'io ‘institution’ io tamin'ny fahantrana tato anatin'izay 70 taona eo ho eo izay. Tsy nisy na dia iray aza. Mifanohitra amin'izay aza, ireo firenena nahatratra fepetra lehibe teo amin'ny fahaleovan-tena ara-bola, toa an'i Brezila, duia nahadita izany tamin'ny fandàvana na koa fanoherana ny fepetra napetrak'ireny ‘institutions’ ireny.
Tsy azo lavina fa i NOI dia hitondra rivo-baovao madio ho an'i Nizeria. Sarotra noho izany no handà ny fomba fijerin'i Nmachi Jidenma izay manao hoe:
… Ho an'ireo mpitondra fanjakana izay mpanao kolikoly sy tsy mpanara-dalàna: ‘wahala dey’. Ohatran'ny hoe tafaverina ao amin'ny firenena ‘ilay vehivavy maha-be olana'! Mazava ho azy fa vaovao mahafaly ho an'ny Nizeriana izany ary ny ankamaroantsika dia faly amin'ny fiverenany.